ONN:Obbo Ibsaa Nagawoo ABOn DH.D.U.O waliin tahuudhaan jijjirama dhiiga Ilmaan Oromootiin dhufe kana fiixaan baasuuf ni hojjata. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVONN:Obbo Ibsaa Nagawoo ABOn DH.D.U.O waliin tahuudhaan jijjirama dhiiga Ilmaan Oromootiin dhufe kana fiixaan baasuuf ni hojjata.
Guyyaa Har’aa Istaadiyeemii magaalaa Jimmaatti Mummichi ministeeraa kabajamoo Dr Abiyyii Ahmed haasawa taasisanii . Haasawa isaanii kanaaniis sochii Diinonni oromoo kallattii garagaraatiin ummata oromoo fi bulchinsa yeroo ammaa Oromoo harka jiru kan diiguuf dhama’aa jiraniif deebii quubsaa laatanii jiru. Kabajamoo Dr Abiyyii Ahmed sochii diinonni taasisaa jiran tuttuquudhaan , Oromoon biyya bulchuu qofa osoo hin taane, falaasama bulchinsaa , nageenyaa fi madda dimookraasii dduunyaaf gumaachaa turuufi ammallee yeroo gabaabaa keessatti falaasama haaray Afrikaa Addunyaaf akka gumaachuuf jiru kabajamoo Dr Abiyyii Ahmed gadi fageenyaan Ummataa biyyattiif akkana jechuun waadaa galanii jirani
“Diinonni keenya Oromoon bulchuu hin danda’u , Oromoon hammatee jiraachisuu hin danda’u je’anii bitaa mirgaan waan garagaraa yaalaa jiru. Yaa Diinota keenya Oromoon bulchuu qofa osoo hin tahin , ijaaruu waan beekuuf yeroo gabaabbaa keessattii akkuma kaleessa falaasama gadaa Adadunyaaf kennetti , Falaasama haaraa Afrikaaf Addunyaaf karaa saayinsawaa taheen kennee akka isinitti agarsiisu waa daa isinii galuun barbaada.Falaasamni Haaraa Dhaabbanni keenya Ummanni keenya waliin tahee addunyaaf guimaachu kun furmaata rakkoo afrikaa keessatti qunnamaa jiruuf furmaata guddaa akka tahu shakkii tokkollee hin qabnu.” Dr Abiyyii Ahmed
Itti Fufuudhaan kabajamoon Dr Abiyyii Ahmed Haasawa isaanii keessatti Oromoon biyya Xoophiyaa je’amtu kana keessatti biyya ijaaruu malee kan diiguu akka hin taane , sabaafsablammoota waliin kabajaa fi jaalalaan jiraachuu malee jibbaa akka hin qabnee fi Ummata biyyattii waliin tahuun nagayaa fi tasgabbii gaafa Afrikaa fi Afrikaa ijaaruuf humni gufachiisuu danda’u akka hin jirre jala saraaranii diinota oromoo hubachiisanii jiru. “Akkuma kaleessa Xoophiyaa ni ijaarra , sabaaf sablammii biyyattii waliin jaalalaaf walkabajaan waliin ni jiraanna waliin taanee gaanfa afrikaaf Afrikaa ni ijaarra jennetti kanarraa humni nu dhaabuu dandayu tokkolleen hin jiru. “Ummanni Oromoo ummata dhukaasa waraanaa hin sodaanne tahuu, ammalleee Oromoon dhukaasa kan beeku jechaan osoo hin taane gochaan tahuu, Oromoon dhukaasa akka dhiukaafamuus waan beekuuf , kallattii waraana miidiyaa , waraana dirree waraana beekkumsaa fi diinagggeen gaggeeffamuutin ummanni oromoo qophaawoo tahuu kabajamoo Dr Abiyyii Ahmad akkana jec huun dubbii isaani keessatti diinota abdii kutachiisanii jiru
“Dhukaasa waraana jechaan miti kan beeynu , gochaan beeynaa. Akka itti waraanamu waan beeynuuf Waraana miidiyaa , waraana dirree waraanatti gaggeeffam, waraana beekkumsaan gaggeeffamu, waraana diinaggeen gaggeeffamu gama hundaan qophaawoo waan taaneef diinonni keenya lama sadi yaaduu qabdu isiniin jechuu barbaanna”